Hel qoyskeeyga lawaayey am lumay
Sidee baynu kaaga caawinaynaa baadigoobkaaga
Waxaynu kuu tilmaami doonnaa nidaamka lagu helayo qooyskaaga –– iyadoo aynu ka dhigeyno sida ugu dhakhsiyaha badan, ugu wax-qabad fiican iyo ugu taxadar badan.
Maxaa yeelay inaad na aamini karto
Laga soo bilaabo dagaalkii koowaad ee adduunka waxaynu dadka ka caawineeynay siday u heli lahaayeen qooyskoodii ay kala lumeen. Waxaynu nahay urur dhex-dhexaad ah oo ka gudbi kara xuduudaha iyo mid xafidi kara macluumaadkaaga shaqsiyadeedSO.
020 3095 6596
Waxaynu nahay caawinaadii adiga ku caawinaysay…
Hel qaraabada aad weeyday
Waxaan la shaqeeynaa Isku-tallaabta Cas iyo Bisha Cas ee dalka ay khuseeyso si’ loo raadiyo qooyskaaga loona soo celiyo xiriirka.
Waxaynu kaa caawinaynaa sidaad wararka u wadaageeysaan qooyskaaga ee dhanka kale ee xuduudaha iyo khadadka dagaalka, xittaa marka ay qaababka kale ee war is-gaarsiinta joogsadaan.
Xaqiijinta meel ku-heeyntaada
Haddii ay Guddiga Caalamiga ee Isku-tallaabta Cas (ICRC) ku soo booqdaan, waxaa laga yaabaa inaynu diyaarinno shahaadada meel ku-heeynta.